Ka sii darani foosha xun: sababta Apple - TELES RESAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Way ka xun tahay fool xun: sababta Apple
Way ka xun tahay fool xun: sababta Apple
TELES RELAY 4 July 2019
Baaqyada cusub ee ku saabsan iPhone waxay soo jeedinayaan soo noqoshada Aqoonsiga Dokumentiga, laakiin waa lagama maarmaan?
Kumbiyuutarka xiga ee Apple wuxuu u baahan yahay wax ka badan Lambarka Touch Touch si uu u sii joogo tartanka. Jason Perlow iyo Jason Cipriani waxay kala hadlaan Karen Roby wajiga waji-waji ah. Wax badan ka baro: https://zd.net/2xqKX9T
Waa dhammaadkii toddobaadka 4 July! Sidaa darteed, waad ogtahay waxa ay ka dhigan tahay: waa bilowgii xilli ciyaareedka ku saabsan iPhone!
Ma naqaanno dhab ahaan marka Apple ay qaban doonto dhacdadeeda iPhone xilliga dayrta, laakiin caado ahaan waxay dhacdaa dhammaadka Sebtembar ama horraanta Oktoobar. Sidaas awgeed waxaan heysanaa toddobaadka 8, dhab ahaantii, ka hor inta aan la ogaan faahfaahinta dhabta ah ee waxa casriga ah ee alaabeed ee Apple ee casriga ah.
iPhone 11: xanta ku saabsan sicirka, sifooyinka, sifooyinka iyo wax kasta oo aan ognahay CNET
Kormeerayaasha Apple sida aniga oo kali ah waxay ku hadli karaan kaliya sifooyinka uu soo bandhigo soo saaraha. taleefan cusub. Si kastaba ha ahaatee, waxaan horey u laheyn indheerooyin badan oo ku salaysan xeelado badan oo ka yimaada shirkadaha ka ganacsiga Cupertino ee Asia, iyo sidoo kale macluumaad kale oo muhiim ah oo laga helo shirkadaha shirkadaha.
Qalab badan oo iPhone ah labadii sano ee la soo dhaafay ayaa ahaa mid soo jiidasho leh, gaar ahaan tan iyo markii la bilaabay FaceID tiknoolaji aqoonsi wajiga ah kaas oo ku jiray taxanaha tan iyo markii la bilaabay iPhone X - waxa ay hadda muuqataa dhammaan jiilalka hadda ee taleefannada ay iibiso shirkadda, XR, XS. iyo XS Max.
IPhone X ayaa si muuqata u taagay iPhone 7 iyo 8: qalabku waxa uu ahaa mid aan caadi aheyn muraayado mana laheyn boodhka goobta muuqaalka. Si kastaba ha ahaatee, noocyada XR, XS iyo XS Max kama aysan kala duwaneyn iPhone X marka la eego naqshadeynta guud ee warshadaha. Apple soo bandhigay qaab arrin weyn in XS Max iyo version ah la function 3D xiriiri cadaadiyeen in Janumet ah, oo la soo bandhigay wanaagsan hoose qiimo hoose, iyo sidoo kale casriyaynta in qaybaha caadiga ah ee GOS oo ah taxane A.
TouchID si aad u soo noqotid sababta oo ah FaceID duufaan?
Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa in farsamada FaceID aysan helin guusha la filayo. Sida laga soo xigtay wargaysyada, TouchID, tiknoolajiyada aqoonsiga fingerprint waxaa asal ahaan lagu soo bandhigay iPhone 6 waxaana hadda laga heli karaa oo keliya iPhone 7 iyo iPhone 8, ayaa laga yaabaa inuu soo laabto si weyn sanadaha soo socda xitaa haddii uu ku qarsoonaa shaashadda (oo ku yaala Huawei iyo OnePlus) halkii laga heli lahaa badhanka qalabka adeegga. Nidaamka cusub ee AppleID TouchID waxa uu u maleynayaa inuu ka shaqeynayo tayada kale duwan ee Android, sababtoo ah dareemaha ayaa u maleynaya inuu ku ordo goob farabadan oo weyn, sidaas darteed farta uma baahna la dheji dareenka.
Natiijada dib u soo celinta TouchID cusub ee shaashadda shaashadda waa in ay sidoo kale siin karto bandhig muuqaal ah oo xooggan. Sida laga soo xigtay warar xan ah, bezel horeba ku dhowaad aan la arki karin, waayo, iPhone XS on 5.8 version inch ah ee iPhone-ka 11 lahaa jiritaan la'aanta, sida Galaxy Samsung ee S10 ama Huawei P30 Pro. Maxkamadda ugu weyn ee "Max" ayaa sidoo kale yeelan doonta joodar yar oo caan ah. Ma jiro ereyo ku saabsan joojinta khilaafka murugsan ee murugsan ee "murugsan"
Xitaa kamarado badan! USB-C! Joy?
Kor u qaadida qalabka kale ee muhiimka ah? Waxay u muuqataa in Apple uu diyaar u yahay inuu tuuro xirafka khaaska ah ee gaarka ah, waxaana laga yaabaa inuu diyaar u yahay inuu u wareego USB-C iyo qalabka xirmidda, sida kiiska iPad Pro. Waxaan soo dhaweynayaa suurtogalnimada in Apple uu u beddeli doono USB-C (iyo 4000 MaH waxay soo saartey batteriga iPhone 11, kaas oo noqon lahaa batoonka ugu weyn ee la gaari karo), laakiin ma hubo haddii qof uu leeyahay iPhone 8. waxay noqon laheyd caddayn u beddelidda qalabkan oo ku saleysan kaliya xogta iyo qalabka xajinta.
Ma aha mid aad u weyn? Waxay u egtahay iPhoneka soo socda inuu helo kamarad saddexaad. Sidoo kale, sida Huawei. Hamaansaddo. Kamarad dheeraad ah macnaheedu waa ka sii wanaagsan Waxay sidoo kale ka dhigan tahay fool xun haddii hindisada taleefanka iyo naqshadeynta guryuhu ay ku xiran yihiin biyo leh xajmiga weyn ee kamaradida dhabarka.
Dhibcooyinka Quantum? Waan ka xumahay.
Kor u qaadka aan si dhab ah u sugayay inaanan muuqan - tiknoolajiyada dareemaha "Quantum dot" in Apple lahaa, sida muuqata, ruqsad ka soo shirkadda tiknoolajiyada British Nanoco la joojiyay ee iPhone 11.
Si ka duwan tiknoolajiyada qalabka CMOS-ku salaysan oo kaliya oo ku saabsan 25% ee iftiinka waxa loo soo bandhigay, dareenka qiyaasta dhererka waa mid aad u xasaasi ah, oo u oggolaanaya dhamaystirka sawir qaadashada. ee elektaroonka ayaa riixa matrixka dareeraha, kaas oo siinaya isirka buuxa ee 100% iyo dareenka afar jeer ka weyn. Ingiriisi? Tani waxay ka dhigan tahay inaad hadda dhisi karto kamaradaha casriga iyadoo la adeegsanayo muraayadaha yaryar iyo aaladaha caalamiga ah ee xasaasiga ah ee u dhigma qaababka waaweyn ee SLRs iyo qalabka casriga ah ee leh qalabka CMOS-ka ee weyn.
Si aad u ogaato wax badan
Si kastaba ha ahaatee, tani ma dhici doonto. sanadkan. Haddii ay taasi dhacdey, waxay noqon laheyd kor u kicitaan dad badan oo isticmaalaya iPhone X ama iPhone 8, oo ay ku jiraan aniga naftayda.
IPhone 11 weli ma isticmaali karaa pixel sare? Tani waa suurtogal, gaar ahaan haddii ay isticmaalaan seddexaad 12MP "Max" iyo in ay ogaadaan talooyinka software si ay isugu geeyaan. Waxaan daruuri ma filan shidma CMOSka ah oo tayo leh ka xoogbadan, oo la mid ah in loo isticmaali by Huawei P30 Pro, taas oo uu leeyahay weyn shidma 40 megapixel la f / 1,6, camera labaad megapixel aalladda ballaaran oo 20 aadan oo ah seddexaad 8 megapixel taleefan si aad u fogeyso. IPhone 11 "Max" waa wuxuu leeyahay qaabka qaabka ultra-ballaaran ee (19459053) ee ka mid ah Huawei P30 Pro, laakiin qalabka CMOS ee kamaradaha kamaradaha kamaradaha weli lama ogaan ilaa maanta.
Hagaajinta sawirada oo hagaagsan No!
Maxaa kale oo aan iman? Waa hagaag, waxba muujinaysaa in Apple ayaa maal badan geshay technology processing image, sida waxa Google ayaa sameeyey Pixel 3 ama in Huawei ayaa la P30 Pro sameeyey. Tiknoolajigaan wuxuu awood u siinayaa in sawir-qaadis lagu sameeyo qalabka iyo dariiqa, iyadoo la adeegsanayo qalab lagu dhejiyo qalabka iyo algorithms si loogu isticmaalo hababka sida Habka Habeynka iyo Muuqaalka Portrait.
Qalabka CMOS iyo sawirada kamaradaha casriga ah ee iPhone ayaa sidoo kale awood u leh. Apple wuxuu ka danbeeyaa horumarinta software kaas oo ku riday heer la mid ah qalabka kamaradaha ee tartamayaashiisa.
I leedahay labada 3 a Pixel iyo XS iPhone Max, iyo sidoo kale tayada dhow-up sawiro aan qaadan, waayo, dib u eegista on makhaayadaha aan sameeyo ee warbaahinta kale waa inta ka sareeya on 3 Pixel ah. Natiijooyinka qaabka qaabka sawirrada ee iPhone ah ayaa la gooyaa oo la yaab leh, iyo inay sawirro ku qaadaan goobaha qulqulaya ayaa ah amar sare oo aan lahayn iftiin dheeraad ah. Tani ma aha kiiska Pixel 3 ama Huawei P30 Pro, kuwaas oo haysta kartida kartida sawirada.
Hagaajinta xisaabinta dariiqa? Nah.
Qalabka wax ka qabashada sawir ee Apple waa aag, si cad, u baahan in lagu xaliyo software-ka ah iyo kaabayaasha dariiqooyinka dhabarka. Dhibaatadu waxay qayb ahaan ka muuqataa xaqiiqda ah in Cupertino aysan haysanin kaabayaal daruuri ah oo loo qoondeeyay sawirro muuqaal ah, oo ka duwan Google. Apple wuxuu yeelan lahaa waxay ku qaadatay 30 million dollar bishii bishii Amazon laakiin ma caddayn ilaa xadkee ayuu isticmaalayaa AWS ee mashiinka barashada iyo hawlaha kale ee farsamada.
Tani waa mid ka mid ah sababaha aan isticmaalo Sawirrada Google ee iPhone halkii laga heli lahaa app Photos app. Tani waa khibrad fiican xitaa haddii sawirada la qaaday iPhone aysan lahayn xuquuqda la midka ah ee sawirada Google sida kuwa lagu siiyay Pixel 3 iyo taleefannada kale ee Android, kuwaas oo u oggolaanaya kaydinta sarreeya iyo Maareynta sawirrada daruuriga Google iyadoo la adeegsanayo qalabka ama kombiyuutarkaaga gaarka ah. Si ka duwan Pixel 3, sawirada iPhone ee Google Sawirrada waxaa lagu kaydiyaa "Tayo Sare" oo la daabacay iyo "Asal" oo aan loo baahneyn.
Waa maxay micnaheedu? Waa hagaag, waxay u egtahay sida iPhone 11 uu noqon doono mid ka mid ah casriyeynta ugu caajis badan xusuusta dhawaanta. Dhammaan waxoogaa horumarin ah oo wanaagsan ayaa ah kuwo wanaagsan, laakiin maaha kuwo qancin, gaar ahaan haddii aad leedahay XS ama XR. Intaa waxaa dheer, halka 11 "Max" ay noqon doonto warshad awood leh oo leh shaashad weyn oo cajiib ah - sida XS Max-ka hadda - waxba u muuqdaan inay u yimaadaan dadkaas kuwaas oo wali doonaya telefoon yar, sida iPhone SE.
Dib ayaan u hagaajin doonaa? Haa, maxaa yeelay waxaan ku jiraa barnaamijka casriyeynta. Tani waxay ka dhigan tahay inaan sii wadi doono bixinta kirada la midka ah, laga yaabo in uu isbeddel ku yimaado dhowr doolar oo bil walba ah. Si kastaba ha ahaatee, taasi micnaheedu waa in ay Lexus kuwa iibiya ka dib markii heshiiska kirada laba sano ah oo gacanta ku furayaasha model la mid ah sida version ee sanadka soo socda ka gaari aad hadda aan wax horumar ah nuxurkiisa keeno - oo joogtada ah ma xiiso lahayn.  Ma waxaad dooneysaa inaad u wareegto iPhone 11? Ii hadal oo ii sheeg.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.zdnet.com/article/worse-than-ugly-why-apples-iphone-11-may-be-the-most-boring-upgrade-ever/
ECA waxay taageertaa istiraatijiyadda horumarinta dhijitaalka ee Cameroon
Heshiiska wanaagsan: Xiaomi Mi 8 Lite casriga ah ee 149 €
Reyna prend la direction d'Austin après la sortie de la NYCFC